राजनीतिक हस्तक्षेपको निमन्त्रणा प्रधानन्यायाधीशबाटै हुन्छ – Rajdhani Daily
राजनीतिक हस्तक्षेपको निमन्त्रणा प्रधानन्यायाधीशबाटै हुन्छ
जनआस्थाको अन्तिम धरोहर न्यायपालिकामा यसपटक इतिहासले कहिल्यै नभोगेको घटना भयो । प्रधानन्यायाधीश आफ्नो उमेरका कारण विवादमा मात्र परेनन्, न्यायालयबाट समेत बाहिरिनुप¥यो । बाहिरिँदै गर्दा न्यायिक नेतृत्वको ‘राजीनामा’ कि उमेरका कारण ‘ढिलो गरी अवकाश’ भन्ने विवाद कायम छ । न्यायपालिकाभित्रको पछिल्लो विवादबारे यसपटक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग राजधानी दैनिकका लागि टपेन्द्र कार्कीले कुराकानी गरेका छन् ।
० यतिबेला न्यायपालिकामा तरंग छ कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?
न्यायपालिकामा यस्तो तरंग आउनै नपर्ने थियो तर, के मिलेन के मिलेन, तरंग आइदियो । बेलैमा बुद्धि पुगेको भए यो तरंग आउँदैनथ्यो । पराजुलीजीको उमेर विवादका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
आफ्नै आठ जना सहकर्मीले बिदा बसे हुन्छ भनेर सल्लाह दिएपछि उहाँले मान्नुपर्ने थियो । राजीनामा दिनुभएको भए परिस्थिति सहज हुन्थ्यो । यसबाट न्यायालयभित्रको जनमतको कदर पनि हुन्थ्यो ।
० न्यायपालिभित्र बसेर काम गरिरहेको व्यक्तिकै उमेर विवाद आउनुमा कसको कमजोरी हो ?
पहिलो कुरा त त्यतिबेला नागरिकतामा पूरा मिति राख्ने चलन थिएन । आफूले जुन उमेरमा नागरिकता लिएको त्यसको आधारमा वर्ष मात्रै उल्लेख गर्ने चलन थियो । यस्तो हुँदाहुँदै पनि निजामति कर्मचारीले उमेर सच्याएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले धेरै फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको उमेर विवादलाई जसरी ल्याइयो, त्यो असजिलो नै थियो । उमेर विवाद देखिएपछि साउनमै ‘घर जान्छु’ भनिदिएको भए त्यो महानता हुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीशजस्तो सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिको पदीय मर्यादा र गरिमा उच्च हुन्थ्यो । न्यायालयमा यति धेरै वर्ष सेवा गर्नुभयो, घर जाने बेला असहज र विवादित बर्हिगमन भयो । नागरिकताको विवादलाई म स्वाभाविक रूपमै लिन्छु । पदको गरिमाका लागि आठ महिनाअघि नै राजीनामा दिनु जरुरी थियो । तर उहाँले किन त्यसो गर्न चाहनु भएन ? मलाई खट्केको विषय पनि यही हो ।
० उहाँको उमेरबारेको यथार्थ विवरण न्यायाधीशहरूले पनि अहिले मात्रै थाहा पाउनु भएको हो त ?
विवाद उहाँ नेतृत्वमा आएपछि नै आउन थाल्यो । अरू न्यायाधीशले गरेको आदेश फैसला पनि उहाँले नै गरेको जस्तो गरी बाहिर आयो । न्यायालयमा आदेश वा फैसला जसले गरेको छ, उसको मात्रै जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीश मुछिँदैनन् । त्यसकारण उहाँले नेतृत्व लिँदादेखि नै विवाद देखिन थाले । जस्तो कर फस्र्योट आयोग र मेडिकल कजेल यी दुवै मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको इजलास होइन तर त्यसको दोष पनि उहाँले नै लिनुप¥यो । हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा अन्य मन्त्रीले काम बिगारे भने त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ तर न्यायालयमा त्यस्तो हुँदैन । जसले आदेश वा फैसला गरेको त्यसको जिम्मेवारी त्यही न्यायाधीशले लिनुपर्छ ।
अर्को पक्ष भनेको चोलेन्द्रजीको आदेश जसरी बाहिर आयो त्यो असाधारण हो, त्यसरी आउनु हुँदैनथ्यो । त्यो इजलासमा अन्य न्यायाधीश पनि छन् । उनीहरूलाई पन्छाएर आफू मात्रै बाहिर आदेश लिएर आउँदा असाधारण भएको हो तर यो मुद्दा कारणसहित हेर्दिनँ भन्न पाइन्छ । त्यो इजलासमा अन्य ६ जना पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहित सहमतिमा उहाँले त्यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अघिल्लो दिनचाहिँ त्यही इजलासमा बस्ने भोलिपल्ट चाहिँ नबस्ने त्यो अलि अपरिपक्व भो ।
० चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलास बहिष्कार गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले पनि भोलिपल्ट अर्को इजलास नदिनुमा कतै प्रतिशोध त होइन ?
त्यो गर्नुहँुदैनथ्यो । कहिलेकाहीँ मानवीय स्वभाव हो बिर्सन सक्छ । एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई प्रतिशोधको भावनाले हेर्न मिल्दैन । भेद्भाव गर्न पाइँदैन । सबै न्यायाधीशलाई इजलास तोक्नै पर्छ ।
० चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर, ‘सँगै बसेर मुद्दा हेर्दिनँ’ भन्नुभयो, यसलाई उहाँको आदेश भन्ने कि प्रभाव र आवेगको निर्णय ?
सीधै त्यसो त भन्न मिल्दैन, उहाँको व्यक्तिगत इच्छाको विषय हो उहाँले किन त्यस्तो लेख्नुभयो ? इजलासमा बसेपछि उहाँले जे कुरा बाहिर लिएर आउनुभयो, त्यो फैसलामा आउनुपथ्र्यो । मुद्दा त एक दिनअघि नै सुनिसक्नुभएको थियो ।
० गोपाल पराजुली दुईपटक संसदीय सुनुवाइबाट यो स्थानमा आइपुग्नु भएको हो । उहाँको उमेर विवाद हुनुमा मुख्य दोषीचाहिँ को हो ?
उमेर विवाद गोपाल पराजुलीप्रति प्रतिशोधको भावनाले भएको होइन । उहाँलाई संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक प्रदान गरेको छ । कतिपयले ‘भ्रष्टाचारी गोपाल पराजुली’ पनि भने । अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म कसैलाई पनि यस प्रकारको अभियोग लगाउन पाइँदैन । पहिलो कुरा त यसमा आफ्नो जन्ममितिको बारेमा आफैं जानकार हुनुपर्छ । उहाँले यस विषयमा नबोल्नु नै यो विवादको प्रमुख कारक बनेको देखिन्छ ।
० तर न्यायाधीशहरू यसअघि नै उहाँको उमेर विवादबारे जानकार हुनुहुन्थो भने किन एउटा विशिष्ठ अवस्थामा आएर मात्र यो कदम चालिनुको कारण के हुन सक्छ ?
यहाँनिर संसदीय सुनुवाइ भएको देश र नभएको देशमा फरक हुन्छ । त्यो विषय संसदीय सुनुवाइ समितिले निरुपण गर्नुपथ्र्यो । उमेरको विवाद पहिला पनि थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले भित्र पस्ने टिकट नै दिनुहुँदैनथ्यो । समितिले उहाँको फाइल मगाएर न्यायाधीशको क्षमता, योग्यता, उमेर, विवाद सबै विषय हेर्नुपथ्र्यो ।
० यही विषयलाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दिनँ भन्दा यसलाई न्यायिक अराजकता भन्न मिल्छ ?
त्यसो भन्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु भनेको प्रधानन्यायाधीशलाई सूचना दिएको हो । उहाँ जसरी विवादित बन्नुभएको छ, देशमा न्यायपालिकाको प्रमुख व्यक्ति नै विवादित बन्नु राम्रो होइन । जनतामा आस्था कम हुँदै गएको छ, त्यसकारण तपाईंले कजलिष्ट नतोक्नुस् भनेको अर्थ अराजकता होइन, उहाँलाई सम्झाएको मात्र हो ।
० पछिल्ला दिनमा अदालतका फैसला, प्रमाण र कानुनका आधारमा हुनुपर्नेमा नियोजित रूपमा हुन थालेको जनगुनासो छ । यसले न्यायपालिकालाई कस्तो अवस्थामा पु¥याउला ?
हो, प्रमाण र कानुनका आधारमा मुद्दा फैसला हुनुपर्ने हो । हाम्रो कानुन र विधिले पनि त्यही भन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी, कानुनविदको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ । सो मापदण्डअनुसार मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले मुद्दामा बहस गर्ने वकिलले निपक्ष भएर फैसला दिने बहस गर्नेलाई तर्साउने थर्काउने धम्क्याउने नाजायज प्रभावमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन
यो विषय गोपाल पराजुलीको हकमा मात्र होइन, अरू न्यायाधीशलाई पनि मुद्दा छिन्न गाह्रो पर्छ । न्यायाधीशले आफ्ना कारणले राजीनामा दिनु बेग्लै कुरा हो तर कोही कसैले ‘तिमीले राजीनामा नदिए अनशन बस्छु, आन्दोलन गर्छु’ भन्नु नाजायज दबाब हो, त्यसका लागि सक्षम संसद् छ । संसद् गुहार्नुपर्छ । त्यो बाटो जानुपर्छ । ‘तिमीले गरेको फैसला म मान्दिनँ’ भन्न पाइँदैन । ‘म यो फैसलाविरुद्ध ज्यान दिन्छु’ भन्न पाइँदैन । त्यो नाजायज प्रभाव हो । न्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गर्न पाइँदैन, यो बेठीक पद्धति हो ।
० न्यायाधीशको अभिलेख त राखेकै होला । परिषद्ले राखेको अभिलेखले नै सबै निर्धारण गर्ने होइन र ?
त्यहाँ तीन, चारवटा एउटै व्यक्तिको नागरिकता हुन गयो, जो नहुनुपथ्र्यो । त्यतिबेलाको कानुनको फाइदा उठाउन खोजियो । मिडियामा आएअनुसार गोपाल पराजुलीले आधार लिएको चाहिँ न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातको फैसलालाई हुनुपर्छ ।
० त्यसरी दुई तीनवटा नागरिकता हुँदा त्यसको अपडेट गरेर राख्ने जिम्मेवारीचाहिँ कसको हो ?
न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातको फैसलापछि नागरिकताको मितिमा जुन पहिला हुन्छ, त्यसलाई आधार मान्नुपर्छ । न्यायपरिषद्ले पनि त्यसैलाई आधार मानेको देखिन्छ । न्यायाधीश बस्न्यातको उमेर विवादमा सर्वोच्चले फैसला गरेपछि त्यसको नजिरमा टेकेर अगाडि बढेको देखिन्छ । मैले यसमा कसैको पक्ष लिनुपर्ने जरुरी छैन ।
० सात महिनाअघि नै ‘तपाईंले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसक्नुभएको रहेछ’ भन्ने अधिकार न्यायपरिषद्का सचिवलाई छ कि छैन ?
उहाँको काम न्यायपरिषद्ले विधिवत् गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । सुशीला कार्कीको पालाको निर्णय छ एउटा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो भने त्यतिबेलै गर्नुपथ्र्यो । आज आएर किन गरियो ? त्यतिबेलै गरिएको भए यो प्रश्न उठ्दैनथ्यो ।
अहिले परिषद्को बैठक बसेको छैन, त्यतिबेलाको निर्णय निकै ढिलो कार्यान्वयन भयो । जसले चिठी लेख्नुभयो, उहाँको बारेमा मैले नराम्रो सुनेको छैन । उहाँ एकदमै जेन्टल र कानुन बुझ्ने मानिस हुनुहुन्छ । त्यस्तो मानिसले त्यतिबेला कार्यान्वयन नगर्ने अहिले किन गरेको हो । उहाँले न्यायपरिषद्को बैठक राख्नुपथ्र्यो । अर्को निर्णय गराउनुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।
० यसमा कहीँ कतै अदृश्य शक्तिको चलखेल छ भन्न सकिन्छ कि ?
त्यहाँ केही शक्तिको चलखेल देखिन्छ । किनभने पराजुली विषयमा जे बाहिर आयो चोलेन्द्रजीको आदेश भर गर्ने होइन, त्यो इजलासबाट आफू बाहिर निस्कने राय हो । त्यो पनि इजलासभित्र ६ जना छन्, त्यसबाट फुत्त बाहिर आएर आफ्नो मात्रै राय दिन पाइन्छ ? उहाँको निस्कने राय पनि मान्न सकिने अवस्था छैन ।
त्यो सचिवले अघिल्लो सचिवले कार्यान्वयन नगरेको कुरा आफू बहाल गरेपछि अर्को बैठक नबोलाइकन आफैंले मात्रै त्यो आँट गरेन होला । त्यहाँ उसलाई दबाब, प्रभाव केही पर्न गयो होला, छानबिनको विषय बन्न सक्छ । उहाँले कुन निर्णयलाई टेक्नुभयो भन्ने कही कतै उल्लेख छैन ।
० भावी प्रधानन्यायाधीसको लाइनमा रहनुभएका चोलेन्द्र श्रीमान्को जुन राय आयो, यसबाट उहाँले कति स्वतन्त्र भएर न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने शंकाको लाभ लिन सकिन्छ कि सकिन्न ?
यसमा समाजले प्रश्न गर्न सक्छ । यदि उहाँले आदेश दिने हो भने अरू ६ जनालाई छलेर आफूले मात्रै फैसला सुनाउन पाइँदैन । त्यसले चोलेन्द्रजीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ ।
० न्यायाधीशका कारण न्यायालयमाथि उठेका विषयलाई ध्यान दिने हो भने अब हामीले न्यायालयबाट के आस गर्न सक्छौं ?
न्यायालयबाटै आस गर्ने हो । गोपाल पराजुली मात्रै त्यहाँको न्यायाधीश होइन । अहिले १९ जना न्यायाधीश छन् । उनीहरू सबै अनुभवी छन् । आठ जनाले साथ दिएनन् वा नौ जनाले साथ दिए भन्ने विषयलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । आठ जना सही सूचना दिए नौ जनाले अदालत खाली राख्नुहुन्न भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
० गोपाल पराजुलीको उमेर हदका कारण अवकाश हो कि राजीनामा हो ?
उहाँको राजीनामा हो, त्यसलाई हामीले राजीनामा मान्नुपर्छ ।
० त्यसो भए न्यायपरिषद्ले पठाएको चिठीको कुनै वैधानिकता रहेन त ?
उहाँले पदमा बसेर कति मुद्दा हेर्नुभयो, कति निर्णय गर्नुभयो ? ती सबै विषयलाई हेर्नुपर्छ । त्यसकारण अर्को बहाली गर्ने र उहाँले राजीनामा दिएको विषयलाई सौहार्दपूर्ण रूपले हेर्नुपर्छ । पत्रको वैधानिकता रहेन, यसैले उहाँले गरेको फैसला वैध हुन्छ ।
० त्यसो भए न्यायपरिषद्को निर्णयको कुनै तुक छैन भन्ने हो भने त्यसको आवश्यकता पनि त रहेन नि ?
सायद, अबको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशको मात्र होइन उच्च अदालतका न्यायाधीशको समेत उमेर विवाद आयो भने जुन पहिलो उमेर छ, त्यसबाट अवकाश भइन्छ भने त्यही नै आधार हो भन्ने मानिन्छ होला । यसरी दुई महिना, चार महिना कोही पनि नबस्लान्, अब कार्यान्वयन गर्लान् ।
० न्यायपरिषद् त पंगु भयो नि ?
मैले धेरै पहिले यो विषयमा एउटा कुरा भनेको थिएँ, न्यायालयलाई टोलसुधार समिति जस्तो बनाइयो । न्यायपरिषद्लाई टोलसुधार समितिको कार्यकारी
परिषद् बनाए ।
० भनेपछि परिषद्को संरचना नै गलत भयो हैन ?
गर्न त यसैमा काम गर्नुप¥यो, अहिले भएकै संरचनालाई सुधार गर्ने हो । अर्को नयाँ संरचनामा जानेभन्दा पनि यसलाई सुधार गर्ने हो ।
० राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा भाग लगाएकैले परिस्थिति नाजुक बन्दै गएको आरोपमा कत्तिको सहमत हुनुहन्छ ?
यो त मैले धेरै पहिलेबाट भन्दै आएको हुँ । यसमा राजनीति घुसाइयो । खिलराजजी आफूले त राजनीति घुसाउनु भएन, उहाँ गएर राजनीतिमा घुसिदिनुभयो । यो विषयमा उहाँलाई दोष नदिऔं । त्यसपछिको नेतृत्वले राजनीतिलाई न्यायपालिकामा निम्त्याए, दलीय हस्तक्षेपको निमन्त्रणा दिए ।
अदालतमा केही शक्तिको चलखेल देखिन्छ
पराजुलीको बहिर्गमनलाई अवकाश नभएर राजीनामा मान्नुपर्छ
न्यायालयलाई टोलसुधार समितिजस्तो बनाइयो
खिलराजजी आफूले त राजनीति घुसाउनुभएन, उहा“ गएर राजनीतिमा घुसिदिनुभयो
न्यायालयका अनियमितता हेर्न अख्तियारजस्तै बेग्लै संवैधानिक निकाय जरूरी छ
० यस्तो हुन नदिन न्यायपरिषद्को भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ ?
प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशको भूमिकामा भर पर्छ । उहाँहरू आफ्नो स्पष्ट अडानका साथ परिषद्को बैठकमा उभिने हो भने अरू तीन जनाले केही गर्न सक्दैनन् ।
० त्यसो भए संरचना होइन, परिषद् सदस्यको अधिकार किटान हुुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, प्रधानमन्त्रीको कोटाको नभई एउटा निपष्क्ष मान्छे चाहिन्छ । जो कानुनमा पोख्त छन् । सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश व्यक्तिहरू ल्याउनुपर्छ भनेको होइन ।
उनीहरूलाई ल्यायो भने झन् बिग्रन्छ । कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक ल्याउनुपर्छ, उनीहरू ६५ वर्ष नाघेको हुनुपर्छ । जसले न्यायाधीशको लोभ गर्दैनन्, त्यस्ता मानिस ल्याउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशबाहेक राजनीतिक गन्ध कतैबाट नआउनेलाई ल्याउन सक्नुपर्छ
एक जना कानुनमन्त्री चाहिन्छ । तर उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा रोक्न सकिन्छ । ‘यो अदालत चलाउने तिमी मन्त्रीले होइन, हामीले हो’ भन्न सक्नुपर्छ । त्यसकारण ‘तपाईंहरूले ल्याउनु भएको व्यक्ति म मान्दिनँ, के कारणले प्रस्ताव गर्नुभएको हो, त्यो तपाईंले पनि लिखित दिनुहोस्, हामी पनि लिखित दिन्छौं’ भन्नु पर्छ ।
यसमा जनाताले मूल्यांकन गर्छन् । यही विषय संसदीय सुनुवाइमा पठाएपछि त्यहीं सबै विषय टुंगो लाग्छ । आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीति त अदालतमा छिर्न खोज्छ तर त्यसलाई रोक्नु प्रधानन्यायाधीशको काम हो ।
० अब भावी प्रधानन्यायाधीशले यी काममा सक्रियता लिन सक्नुहोला त ?
प्रशस्त काम गर्नुसक्नु हुन्छ । त्यसका लागि दृढ आत्मविश्वास चाहियो । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका बलियो बनाउनुपर्छ । विश्वनाथ उपाध्यायको जस्तो आँट हुनुपर्छ । विश्वनाथलाई कोही कसैले पनि चलाउन सकेनन् ।
० आउने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूमा त्यो हिम्मत कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सम्भावना बोकेका न्यायाधीश छन् । मान्छे राम्रा छन् । एक दुई जनाको त स्वभाव नै फरक हुन्छ । तर सम्भावना नै नभएको भने होइन ।
० अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
मैले सर्वोच्चमै हँुदा पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ, यसको छानबिन हुनुपर्छ’ भनेको थिएँ । त्योभन्दा अरू साथीहरूले न्यायाधीश भएर न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको विषयमा मुख खोल्न सकेनन् ।
० त्यसो भए न्यायालयको भ्रष्टाचार हेर्न छुट्टै निकायको आवश्यकता छ ?
न्यायपरिषद्ले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र कारबाही नै गर्न सक्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै बेग्लै संवैधानिक निकायको आवश्यकता छ ।
० त्यस्तो निकाय कस्तो हुनुपर्छ ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई त्यहाँ छिर्न दिनुहँुदैन । आफैं त्यहींबाट गएका कारण उनलाई छिर्न दिनु उचित हुँदैन । अदालतमा न्यायाधीश भएपछि मन्त्र सुनाएको गुरुको पनि मुद्दा हेर्न मिल्दैन । अपराध अनुसन्धानमा पोख्त भएका व्यक्ति, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, बारका वकिल जसले कानुनको राम्रो व्याख्या गर्न सकून् । यस्ता व्यक्तिको संरचना तयार हुनुपर्छ ।
यसरी बन्ने संयन्त्रमा आउनेको मात्र होइन अब उच्च अदालतका न्यायाधीश पनि संसदीय सुनुवाइमार्फत मात्र नियुक्ति गरिनुपर्छ । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले आदलतमा हुने भ्रष्टाचारको निर्मुल गर्ने प्रण गर्नुपर्छ । त्यसलाई हेर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
० अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशको विवेक प्रयोग गर्न हामी कहिलेसम्म छुट दिन्छौं ?
यो विषयलाई न्यायाधीशकै विवेकमा छुट दिन मिल्छ । प्रेस स्वतन्त्रता छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, यसमा बोल्न पाइन्छ तर अदालतको अवहेलना गरेर बोल्न पाइँदैन । त्यसमा लक्ष्मण रेखा छ । अदालतले पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाउन पाइँदैन । अदालतले आफ्ना कर्मचारीबाट टिप्पणी उठाएर अवहेलना मुद्दा दर्ता गराउने कार्यविधि सच्याउनुपर्छ ।
० भावी प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको गिर्दो जनआस्था माथि उठाउन केके काम गर्नुपर्छ ?
आफूले गर्नुपर्ने कामको विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्न अहिलेको संयन्त्रले काम गर्न नसक्ने भएकाले छुट्टै संयन्त्र बनाउन पहल गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा कस्मेटिक परिवर्तन भइरहेको छ । रणनीतिक परिवर्तनले मात्र केही हुँदैन । फौजदारी अपराधहरू भइरहेका छन्, जसलाई निरुपण गर्न अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै अदालत गठन गर्नुपर्छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले फाल्ने व्यवस्था हटाएर संसद्को दुईतिहाइले हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिलाहरूका लागि पारिवारिक अदालत गठन गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
० तर कामु प्रधानन्यायाधीशको धोको त म्युजियम बनाउने पो देखियो नि ?
त्यो पनि जरुरी होला, यो कार्य गरिरहँदा जनआस्था बढाउन, न्यायालय बचाउन, स्वतन्त्र राख्न, दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न नेतृत्व नै बलियो हुनुपर्छ । आफू विवादमा पर्दा पछि हट्न सक्ने साहस भएन भने न्यायपालिकाको साख माथि उठ्दैन ।